Simbi yezvigadzirwa zvemagetsi vatengesi uye fekitori - China Simbi yemitambo zvishongedzo vagadziri
Minimalist simbi chena mutifunction bhasikoro rack
Multi dzichipfekeka simbi rusvingo pasherefu
Simbi yemadziro esherufu yemufananidzo furemu
YOKUSHANDISA HOUSE madziro esherufu
Inokurudzira simbi inoratidza hanger
Kushambira menduru hanger
Mutambo menduru hanger yeiyo Kumhanya uye Marathon menduru
Simbi mukombe pasherefu ine menduru hanger
Imbwa poop bhegi dispenser simbi dzinovaraidza tsvina chiteshi ne ...
Metal kiyi Rack & Imbwa Leash Hanger
Asina kutsvedza imbwa yekudyisa ndiro
Yakasununguka yakasununguka imbwa yekudyisa ndiro
Stainless simbi yakanakisa yakasimudzwa imbwa yekudyisa ndiro
Kicheni mupumburu bepa mubati
Chimbuzi rwakapetwa bepa mubati
Ruva rehupenyu Napkin mubati
Rinorema basa: yedu SUP uye surfboard siringi rack yakagadzirwa ichishandisa simbi dzese kumira uremu hweanorema paddleboards uye marefu mabhodhi achigadzira yakasimba uye yakasimba dhi paddle bhodhi yekuchengetera rack. Rack rakareba masendimita gumi nemasere uye ruoko rumwe nerumwe kutsigira mapuranga rwakareba masendimita makumi maviri nemashanu. Rutivi rumwe nerumwe rwechigadziko runogona kubata kusvika mapaundi makumi manomwe nemashanu.
Adjustable – Iwo machira anogadziriswa kumusoro uye pasi kubva pamasendimita gumi kusvika gumi nemasere.
Kudzivirirwa kwese kwese: Rumwe nerumwe ruoko rwakaverengerwa pamwe neyedu SUP bhodhi rack inouya yakashongedzwa neyakawedzera gobvu padding yekudzivirira uye kudzivirira kukuvadzwa kunoitwa kubhodhi rako kusiyana nezvakawanda mapadhibhodhi mabhodhi. Yedu yesimbi zvinhu zvakare inogara yakasimba uye ngura inodzivirira kumira munzvimbo ine mvura yemunyu.
Yakakwana kune akawanda marudzi emabhodhi: kusiyana nemazhinji maSUP maraki ekuchengetedza madziro, ino padhi bhodhi mubati anogona kubata anosvika makumi maviri nemashanu.'' yakafara bhodhi uye inogona kubata surfboards, paddleboard, marefu mabhodhi, skis, uye mamwe maKayaks. Kurumidza uye nyore kumisikidza: mazhinji padhata bhodhi racks garaji yakachengetwa yakaoma kuisa pamwechete. Yedu yepaddle bhodhi kukwira kuri nyore kumisikidza! Iyo simbi inokwira ine yakapihwa Hardware inogona kuiswa nyore padenga uye mawoko akapfekerwa erack akakwenenzverwa mugomba kuitira rakachengeteka uye nyore setup.
OEM & ODM: Isu tinoita zvese zvakagadzirwa simbi zvigadzirwa, zvakare yedu nyanzvi dhizaini timu inogona kugadzira zvigadzirwa maererano nezano revatengi.
Dhizaini: Yekutanga menduru hanger dhizaini.
Hunhu: Yakagadzirwa kubva inorema-basa simbi zvinhu. Yakasimba kwazvo, yakasimba, ine ruzivo rwakakwana. 100% yemhando yekutarisa isati yatumirwa.
Saizi: 12 "L, 14" L, 16 "L, 18" L nezvimwe.
Pedzisa: Durable poda yakavharidzirwa yevatema magadzirirwo, Ruoko rwakasungwa sirivheri ruvara rweasina simbi dhizaini.
Yakasimba simbi zvinhu, haikotame pamusoro nyore nyore.Rusty yemahara.
Isu tanga tiri mukugadzirwa uye kugadzirwa kwemenduru yekuratidzira hanger kweanopfuura makore gumi.Pamusoro pe200+ dhizaini yemitambo inodarika makumi matatu yemitambo.
Mutambo menduru hanger yemitambo dzakasiyana dzemitambo
Dhizaini: Yekutanga simbi pasherufu dhizaini, yakapusa asi yakashongedzwa.
Kukura kunowanikwa: 40cm L, iine maviri magineti clip kubata emabhiza emabhiza kana pikicha.
Pedza: Durable upfu zvemapuranga nhema.
Yakashandiswa Kwakawanda: Ratidza trophy, diki yekushongedza, menduru dzakaturika, bata marudzi emakwikwi kana pikicha.
Simbi yemadziro esherufu yekuratidzira Trophy nemenduru.
Wood trophy sherefu neshongwe yemenduru
Dhizaini: Multi-inoshanda huni pasherufu dhizaini, yakanaka pakuratidzira mukombe uye menduru.
Hunhu: Yakagadzirwa kubva yakasimba pini huni, ine ruoko rwekupenda kupera.
Saizi: 17 "L. iine makumi maviri neshanu zvikorekedzo zvekubata menduru kana mabhegi, makiyi nezvimwe.
Pasuru: 1pc / bhokisi.
RUNNER menduru hanger
Nyore uye naka RUNNER menduru hanger dhizaini.
Dyara Poto Hanger, Makiyi Ekubata Hook, Simbi Madziro Art, Bhachi Hanger Rack Hooks, Wall Hanging Kudyara Bhureki, Kiyi Hook Murongi,